Fizarana Vatsy tsinjo: betsaka ny fahadisoan’ny tapakila etsy Andohatapenaka I - ewa.mg
News - Fizarana Vatsy tsinjo: betsaka ny fahadisoan’ny tapakila etsy Andohatapenaka I
Nisavorovoro ny vahoaka ao amin’ny
fokontany Andohatapenaka I manoloana ny fizarana ny vatsy
sosialim-bahoaka, omaly, araka ny fitarainan’ny solontenan’izy
ireo. Teny amin’ny ENS Ampefiloha no nanaovana ny fitsinjarana ny
fanampiana avy amin’ny fanjakana ho an’ity fokontany ity. Rehefa
nomena ny tapakila ahafahan’izy ireo mandray ny fanampiana, gaga ny
olona fa diso avokoa ny anarana sy ny laharan’ny kara-panondro fa
ny adiresy ihany no marina. Tsy afaka misitraka ny vatsy anefa raha
vao tsy mitovy ny anarana ao amin’ny kara-panondro sy ny lisitra
eny amin’ny mpizara ary ny tapakila nozaraina isan-trano.
Velon-taraina noho izany ireo niharan’ny fahadisoana ary
nambaran’izy ireo fa fanahiniana niainga avy ao amin’ny
mpiandraikitra ny fokontany izao. Nanana olana tamin’ny mponina tao
an-toerana ny mpitantana ny fokontany ary efa noesorina ny sefo
fokontany teo aloha ka ny lefiny ihany no nandray ny andraikitra
vaovao. Tsy matoky intsony ny vahoaka fa misy zavatra tsy mazava
ity fizarana sosialim-bahoaka ity satria maro no tsy nahazo izany
vokatry ny fahadisoana. Nandeha nanontany ny tokony hatao teny
anivon’ny fokontany izy ireo ary miandry ny ho valin’izany.
L’article Fizarana Vatsy tsinjo: betsaka ny fahadisoan’ny tapakila etsy Andohatapenaka I a été récupéré chez Newsmada.
Kitra afrikanina – «Ligue des champions»: resin’ny Fosa Jr tamin’ny isa tokana 1 no ho 0 ny Pamplemousse SC
Fandresena tamin’ny isa manify no azon’ny Fosa Jr, nanoloana ny Pamplemousse SC avy atsy Maorisy, teo amin’ny lalao savaranonando mandroso, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “ligue des champions”, taranja baolina kitra.Tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0, no nandresen’ny Fosa Jr ny Pamplemousse SC avy atsy Maorisy, nandritra ny lalao savaranonando mandroso, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “ligue des champions”, taranja baolina kitra. Fihaonana, notanterahina ny asabotsy lasa teo, tany amin’ny kianja Rabemananjara, Mahajanga.Baolina matin’i Baggio, teo amin’ny minitra faha-34, tamin’ny alalan’ny “penalty”, taorian’ny fingana nataon’i Augustin, tamin’i Lekadoda, tao anatin’ny faritra tsy azo ivalozana.Sahirana ry Elio sy i Dahery, teo amin’ny fanafihana satria tsy nahavaky ny vodilaharana maorisianina, nisy an-dry Lafoudre sy ry Diaz. Nanjakan-dry Santatra sy ry Baggio ny famezivezena ny baolina teo afovoan’ny kianja fotsiny, fa tsy nahita irika nandinganana teo amin’ny fiarovantena maorisianina. Na izany aza, nisy ihany ny baolina tokony ho tafiditr’i Elio, teo amin’ny minitra faha-19, taorian’ny tolotra nataon’i Baggio, saingy voasakan’i Jean-louis, mpiandry tsatobin’ny Pamplemousse, izany. Nanantombo, tamin’ny isan’ny “corner” ny Fosa Jr, izay nahatratra 10, saingy tsy nitondra n’inoninona izany.Lesoka ny fampidiram-baolinaNitovy tamin’ny lalao teo amin’ny fizaram-potoana voalohany hatrany ny endri-dalao teo amin’ny tapa-potoana faharoa. Nanindry hatrany ny Fosa Jr, saingy tsy nisy ny baolina tafiditra. Toy ny an’i Dahery, teo amin’ny minitra faha-54, izay nidona tamin’ny tsatoby ny dakany.Torak’izany koa ny an’i Andry Max, teo amin’ny minitra faha-58. Niakatra ny baolina nodakany, nefa izy sy ny tsatoby, irery. Taorian’io, nosoloina i Fabrice, mpiandry tsatoby malagasy, noho ny ratra nahazo azy, taorian’ny “corner”, azon-dry zareo Maorisianina, teo amin’ny minitra faha-70 ary nosoloina an’i Nina.Nitsitapitapy ny fanafihan-dry zareo Pamplemousse izay tsy dia nisy natahorana loatra, notarihin’ireo Malagasy mirahalahy, Hollas sy i Fabrini ary ilay Nizerianina, Sunday. Hatreo amin’ny minitra faha-90, tsy nijanona ny fanafihan’ny Fosa Jr, saingy tsy nety nahafaty baolina izy ireo. Anisan’ireny, ny tolotra nifanaovan’i Santatra sy i Elio, saingy voasakan’i Jean-Louis, ny baolina.Lesoka hatrany ny famonoam-baolina, ho an’ny Fosa Jr Boeny. Betsaka ireo tokony ho faty, saingy tratry ny fikoropahana hatrany ireo lohalaharana ka matetika mivoaka ny tsatoby, ny dakan’izy ireo.Tsy ampy fifantohana ihany koa ka very hatrany ireo tolotra. Efa voafehin-dry Baggio sy ny namany kosa ny eo afovoan’ny kianja fa ny famaranana azy sisa no mila hamafisin’ny mpanazatra. , mialoha ny hiatrehana ny lalao miverina, hatao any amin’ny kianja Georges V, ny asabotsy 24 aogositra, ho avy izao. TompondakaL’article Kitra afrikanina – «Ligue des champions»: resin’ny Fosa Jr tamin’ny isa tokana 1 no ho 0 ny Pamplemousse SC a été récupéré chez Newsmada.
Ady amin’ny valanaretina: nizara arovava ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany
Ady iraisan’ny rehetra sy ifarombonana. Anisan’ny lamina napetraky ny fitondram-panjakana ny hizarana isam-batan’olona ny arovava mba hiarovana ny tsirairay sy ny manodidina azy. Tafiditra ao anatin’ny ady atao amin’ny fipariahan’ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Miditra an-tsehatra sy mandray andraikitra amin’izany fizarana izany ireo minisitera miisa 24 ao anatin’ny governemanta. Anisan’izany ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Nisahana sy niandraikitra fokontany fito ao anatin’ny boriborintany fahatelo, eto anivon’ny kaomina Antananarivo Renivohitra (CUA) sy eny amin’ny kaomina Iarinarivo sy Antehiroka eny amin’ny distrika Ambohidratrimo izy ireo amin’ny fizarana izany.Nanomboka omaly ary hitohy hatramin’ny alahady 26 avrily izao izany fizarana izany ary hiarahana miasa akaiky amin’ireo komity loharano isam-pokontany.Synèse R. L’article Ady amin’ny valanaretina: nizara arovava ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany a été récupéré chez Newsmada.
Nikatona tanteraka ny ridaon’ny hetsika « Festival Allée des Baobabs » andiany faharoa, izay notanterahina sy nokarakarain’ny fikambanana Tafaray tany Morondava, ny 17 – 25 novambra teo. Nampiaina tanteraka ny tanànan’i Morondava, indrindra ireo tanora, tao anatin’ny fanatanjahantena sy fampisehoana ny hetsika. Ny vola voaangon’ny fikambanana Tafaray nandritra ny herinandron’ny « Festival Allée des Baobabs » kosa, dia hatolotra manontolo ho an’ny hopitalin’i Morondava. Mpiara-miasa tamin’iny hetsika iny koa ny Vondrona RLM Communication, izay ahitana ireo gazety mivoaka isan’andro, toa ny La Ligne de Mire, Triatra, La Dépêche de Madagascar, Le Citoyen, Akon’i Madagasikara, sns. L’article Festival Allée des Baobabs : Nampiaina ny tanànan’i Morondava a été récupéré chez Triatra.
Mpianatry ny oniversite: tsy olana ny tetiandro fidirana
Tsy maintsy mamita ny taom-pianarana 2018-2019 mialoha ny 2 novambra ireo lalam-piofanana tsy nahatontosa ny azy satria nambaran’ny filoha fa io no fotoana hisantarana ny taom-pianarana vaovao 2019-2020 ho an’ny oniversite rehetra. Ho an’ny oniversiten’Antananarivo, misy ampahany betsaka no tsy mbola namarana ny taom-pianarana sy nanao ny fanadinana fitsapana farany ho an’ny taom-pianarana 2018-2019 noho ny fiatoan’ny asan’ny mpampianatra mpikaroka. Nanambara ny fikambanan’ny mpianatra amin’ny faritra 22 eny amin’ny oniversite Ankatso fa manana fotoana hiomanana tsara ny ray aman-dreny hanefana ny saram-pisoratana anarana ho an’ny taom-pianarana vaovao. Ny lalana rahateo efa misokatra ankoatra ny any Diana sy Sava ka afaka miverina aty Antananarivo manomana ny fidirana ny mpianatra mbola tavela any amin’ny faritra. Tsy mametraka olana ho an’ny mpianatra ny tetiandro napetraka. Ho an’ny taom-pianarana vaovao, nahavita ny fandraisana ny antontan-taratasy sy ny fifaninanana hifantenana ny mpianatra amin’ny taona voalohany ny fakiolte rehetra fa ny fisoratana anarana no hany sisa tsy tanteraka hatramin’ny farany.Vonjy L’article Mpianatry ny oniversite: tsy olana ny tetiandro fidirana a été récupéré chez Newsmada.
Nifototra tamin’ny fanaovana tomban’ezaka tamin’ny ady natrehan’i Madagasikara tamin’ny valanaretina Covid19 sy ny fanarenana ny aratoekarena ny kabarin’ny praiminisitra Ntsay Christian nivantana tamin’ny fahitalavitra nandritra ny fivoriambe faha75 an’ny Firenena mikambana (NU) tany New-York (Etazonia), tamin’ny sabotsy lasa teo. Nasongadiny ny fahombiazan’ny fampiasana ny tambavy vita Malagasy Covid-Organics (CVO) tamin’ny fitsaboana an’ireo marary teto amintsika. Nampahafantariny nanoloana an’ireo mpanaraka ny tafa mivantana tamin’ny fahitalavitra fa « nahatrara 93 % ny tahan’ny fahasitranana teto Madagasikara ». Notsiahivin’ny Praiminisitra koa ny firosoan’ny fanjakana malagasy tamin’ny fanampiana ara-tsosialy ho an’ireo olona marefo, ankoatra ny fisaorany an’ireo mpiara-miombon’antoka nanampy an’i Madagasikara tamin’ny fiatrehana ny valanaretina. L’article Fivoriamben’ny firenena mikambana :: Nivalampatra tamin’ny Covid-19 ny Praiminisitra malagasy est apparu en premier sur AoRaha.